What's So Good About Good Friday? — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Zvinoitika kuyeuka zuva mumwe afa. Munhu warasikirwa nomunhu wavanoda anoziva kuti iwe handimbofa zuva Vakapfuudza. Zviri kuguma upenyu, uye dzinosiririsa.
Ehe saizvozvo, sezvo dzinza revanhu, hatidi chete kurangarira vadiwa. Apo zvinokosha voruzhinji kufa, tinoyeuka mucheme zuva vabatwa nesu pamwe. rudzi rwedu anoyeuka zuva Martin Luther King Jr. akapfurwa, uye zuva John F Kennedy akaurayiwa. Asi mazuva iwayo kunyanya hazvitombokohwewi vachinzi zvakanaka. Vaya vaiva zvinotyisa mazuva, apo vanhu vanodiwa vakapondwa ne akaipa vavaurayi.
asi, zviuru zviviri apfuura Jesu weNazareta akapondwa yake ruvengo vavaurayi, uye tinorangarira kuti zuva se "Good” Chishanu. Chii saka zvakanaka pamusoro zuva apo vakawanda vakataura pamusoro murume munhoroondo yevanhu akarohwa nechisimba uye vakaurayiwa nevavengi vake?
Chokwadi chokuti vanhu vakaipa achida vanofungireiko kuuraya Mwanakomana waMwari ndiye dzakaipisisa uye hapana mubvunzo chivi chikuru nokusingaperi vakaita. Asi rufu rwake rakasiyana nemamwe rufu asati kana shure kwaro . Tinogona kudana kuti zuva "Good" Friday vazhinji zvikonzero. He tiri vaviri.
1. Good Friday zvakanaka nekuda naJesu kuburikidza norufu rwake
Apo vazhinji vedu pedyo rufu, tiri kuuya kuguma basa kuti upenyu hwedu uye vachitarisira rugare zororo. Asi apo Jesu akaenda pamuchinjikwa, Akanga kutanga rinokosha chikamu basa roupenyu hwake. Kufa kwaJesu kwaiva kupfuura panoperera mwoyo urove; waiva kuurayiwa urongwa hwaMwari kuponesa vatadzi. Jesu akatsunga kutora chivi rwaiparadzanisa isu kubva kuna Mwari, kana Pauro anoti, Jesu akanga, "Nokuita rugare kubudikidza neropa remuchinjikwa wake" (VaKorose 1:20).
Teerera This mashoko Galatians 3:13, "Kristu akatidzikinura kubva pakutukwa kwomurayiro nokuva akatukwa nekuda kwedu, nokuti kwakanyorwa kuchinzi, 'Ngaatukwe munhu wose ari pamuti' "
Pasinei ake mhosva, Jesu Kristu akamira panzvimbo yavatadzi, uye akatora mutongo kuti takave atambira.
1 Peter 3:18 anoti, "Nokuti Kristuwo wakatambudzika kamwe nekuda kwezvivi, akarurama nokuda kwavasakarurama, iye isu kuti atiise kuna Mwari ... "
Nezuva Mwanakomana waMwari akaurayiwa kunogona kunzi zuva rakanaka, nokuti nawo tiri vakauya kuupenyu!
2. Good Friday wakanaka nokuti hakusi kuguma nyaya
Mwari akamumutsa, muchisunungura kurwadza kworufu, nekuti zvakanga zvisingabviri kuti iye asungwa naro. (Acts 2:24)
muviri waJesu havana kuramba ndinongopfuura uye upenyu. Svondo mangwanani, Akamutswa kubva grave- azere nesimba nokubwinya. Akanga aona, munyama, nemazana afa, uye nokukurumidza pashure akakwira Matenga.
Dai Jesu akanga asina amuka kubva muguva, zvino isu kugona kudana ichi "Good Friday." Kudai Jesu akanga achiri muguva, Ndinoda kuva zvachose pasina tariro. Paisazova tariro rokuregererwa murume yevatadzi kana kudzorerwa kuti nyika yedu kuputswa. Asi tinoziva kuti iye akamutswa, uye izvi zvinotipa chikonzero chokufara uye kuvimba naye.
Ponesai nziyo dzemariro dzako uye R.I.P. venyu, nekuti Jesu Kristu haasisiri akafa. Iye ibenyu uye tsime, uye Iye anotonga mukuru! Good Friday ari Good News vatadzi akafanana neni.
dempsey tapley • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 8:44 ndiri • pindura
dombo shora • Kurume 19, 2015 pa 10:17 pm • pindura
Love ichi! I am almost reading this 2 Papera makore, but it was definitely worth my read and it just inspired me to praise and hope all the more for the future GOD has in store for me and my family in and through JESUS CHRIST! IN JESUS NAME, AMENI!